Ciidanka Bilayska Somaliland Oo Xoog U Adeegsaday Shaqaale Ku Mudaharaaday Wasaaradda Maaliyadda Iyo Jawaabta Uu Ka Bixiyay Cabashadooda Guddoomiyaha Hay’adda Shaqaaluhu | Araweelo News Network (Archive) -
Ciidanka Bilayska Somaliland Oo Xoog U Adeegsaday Shaqaale Ku Mudaharaaday Wasaaradda Maaliyadda Iyo Jawaabta Uu Ka Bixiyay Cabashadooda Guddoomiyaha Hay’adda Shaqaaluhu
Hargeysa(ANN)Ciidanka Booliska Somaliland ayaa xoog u isticmaalay shaqaalihii ku hadhay dhowaan imtixaankii laga qaaday ee Wasaaradda maaliyadda, kuwaas oo saaka barqadii usugu soo baxay mudaharaad ay kaga cabanayeen natiijadii Imtixaanka. kadib markii ay boodhadh
la horyimaadeen mudaharaadeyaashu xarunta wasaaradda maaliyadda oo ah duleedka Madaxtooyada Somaliland.
Balse Ciidanka Bilayska ayaa xoog ku kala kexeeyay shaqaalaha cabanayay, waxayna u adeegsadeen budhadh iyo qoryaha dabadooda qaar ka mid ah oo ay gacanta ku dhigeen, iyadoo xabsiga loo taxaabay qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha Wasaaradda Maaliyadda iyo xarunta Madaxtooyada Somaliland, isla markaana ma jirin cid masuuliyiin ah oo la hadashay shaqaalaha cabanayay ee isu soo baxa sameeyay oo sheegay inay muddo dheer shaqaynayeen.
Kooxda Shaqaalaha ee ku hadhay imtixaanka laga qaaday todobaadkii hore oo ahaa 88-kii qof ayaa cabashadooda ku sheegay in imtixaankii laga qaaday aanu cadaalad ahayn, isla markaana intii la doonayay la riday oo iyaga sidaa lagu reebay. waxay siteen boodhadh ay ku qoran yihiin halku dhigyo ay ka mid yihiin “Imtixaanku wuxuu ahaa mid aan cadaalad ahayn oo siyaasadeysan” iyo halku dhegyo kale oo ay ku xardheen cabashadooda.
Shaqaalihii wasaarada maaliyadda ee todobaadkii hore u fadhiistay imtixaanka ayaa tiradoodu ahayd 222 qof, kuwaas 103 ka mid ahi ku guulaysteen inay ka gudbaan Imtixaanka, balse waxa iyagu ku guuldaraystay inay ka gudbaan 88 ka mid ahaa tiradaa oo natiijada kasoo baxaday Imtixaanka ka murugooday. Kadib markii ay dhaceen. Iyadoo 31 qof oo ka mid ah shaqaalaha wasaaraddu aanay iyagu weli gelin Imtixaan, balse ay sugayaan in laga qaado imtixaanka.
Waxaana soo baxay natiijada imtixaankaa ka dib cabashooyin la xidhiidha qaabka loo qaaday iyo waxyaabaha uu nuxur ahaan ka koobnaa imtixaanku oo ay shaqaalaha cabanaya ee gudbiwaayay ku doodayaan in aan xaq loogu lahayn. Sidoo kale shaqaalaha ku hadhay Imtixaankaa oo qaarkood mudo dheer ka shaqaynayeen wasaaradda ayaa maqlay warar aan xaqiiqda la hayn oo sheegaya in la eryay dadkii ku dhacay imtixaanka, isla markaana laga goynayo mushaharooyinkii ay qaadan jireen.
Hase yeeshee Guddoomiyaha Ha’yada shaqaalaha dawlada Muxumed Aw Cabdi oo ka hadlay arrinta imtixaanka ayaa sheegay in shaqaalahaasi dhacay loo furayo tababar shaqo isla markaana ay dib ugu soo laaban doonaan shaqooyinkoodii. Waxase uu beeniyay in mushaharka laga jarayo.